प्रामाणिक रिफ्रारेड बीन कसरी बनाउने सडकको लागि एक युगल
प्रामाणिक परिष्कृत फल कसरी बनाउने
सेप्टेम्बर 12, 2018 / एक टिप्पणी छोड
जब यो प्रामाणिक मेक्सिकन व्यञ्जनमा आउँछ, रिफ्रिड सेम एक अयोग्य स्टेपल हो। कुनै पनि खाना-मायालु भान्सामा मनपर्ने, रिफन्ड सेमहरू वास्तवमा "दुई पटक सुकेको" होइनन्, तर वास्तवमा "मूल-फ्रिड" अनुवाद गर्न, "वास्तवमा फ्रिडिफ्रेट फ्रान्सिटोस" भनिन्छ।
रिफ्रिड सेन्सले सधैं बिराटोस र फेजिटसबाट केहि चीजको स्वादिष्ट हुन्छ, केवल पनीरको अतिरिक्त छिद्र संग आफुलाई फ्याँक्ने र आफूलाई आफैं खान पाउने। मेक्सिकोको Yucatan प्रायद्वीपमा हुँदा, हामीले केहि उत्कृष्ट उदाहरणहरू नमूना गरेका थियौँ जुन हामीले घर फर्केपछि पुनरुत्थान गर्न आशा गर्थे र एकदम कम अनुसन्धान गरे कि उत्तम प्रमाणपत्र र उत्तम प्रमाणपत्रका लागि उत्तम विधि पत्ता लगाउनुहोस्। यो सबै क्लासिक मेक्सिकन खाना र स्वाद चाहने को लागि यो एक उत्कृष्ट नुस्खा हो!
Pinto beans पारंपरिक रिफ्रिड सेम को लागि आधार हो, र हल्का रंगीन सेम, राम्रो! यी हल्का रंगको पिन्टो सेमहरू गर्मीमा हुन्छन् र गहिरो, सम्भवतः अधिक उमेरको संस्करण भन्दा छिटो पकाउँछ। एकपटक तपाईंले आफ्नो सुक्खा सेम प्राप्त गर्नुभएपछि तपाइँ भिन्नताहरू देख्नुहुनेछ र तपाईंले कुकिनु चाहानुहुन्छ जुन हटाउन सक्नुहुनेछ।
तपाईंको कच्चा पिन्टो बीन्सलाई द्रुत तुल्याउनुहोस् (र ती सेमबाट ब्लोटको संभावना हटाउनुहोस्!)
2 र frac12 को बारेमा प्रयोग गर्नुहोस्; सुत्ने बीउको सुरुवात।
बैच भन्दा राम्रो सेमलाई लिनुहोस् - हल्का, नचाहिने, र कुनै बाधाहरू टाउकोमा जस्तै कि प्याकेज भएको हुन सक्छ कि ग्याँसको सानो बिट।
उचित आकारको बर्तन प्रयोग गरेर, पिन्टो सेमलाई पानीको साथ (केहि इन्च सम्म) लाई लुकाउनुहोस् र यसलाई रोलिंग फोडा ल्याउनुहोस्।
3 मिनेटको लागि गर्मीमा छाप्न बत्तीको आवरण प्रयोग गर्नुहोस्।
बर्नरबाट बर्तन लिनुहोस् र 60 मिनेट वरपरको लागि अलग रहन दिनुहोस्।
खाना पकाउने तयारीमा बर्तनबाट पानी खान्नुहोस्।
यो सबै भन्दा तेज तरीका हो, रातभर रातो सेम भिडन्त विकल्प। या त प्रभावकारी छ, तर यदि तपाईं केही प्रामाणिक मेक्सिकन व्यञ्जनको लागि भोकाउनु हुन्छ भने छिटो राम्रो छ!
एक द्रुत साबुन पछि, यो पिन्टो बियर कुक तयार छन्!
ठूलो बर्तनमा, सेमहरूलाई तीन इन्च पानीको साथमा राख्नुहोस्, एक चम्मचको चम्मच मिश्रण, मिश्रण र एक फोडा ल्याउन। पानी पछि छिटो फोडा सुरु गर्न पछि, गर्मी कम गर्नुहोस् ताकि सेम सिमिंग, कवर, र 2.5 घडीको लागि पकाउनुहोस्। पिटोटो सेन्स खाना पकाउँदा समाप्त हुन्छ जब नरम र छाला खुला ब्रेक हुन्छ।
पानीलाई अलग कटोरामा तनाव गर्नुहोस् (तपाई पछि यसलाई प्रयोग गर्नु पर्दछ!) र पूर्णतया तिनीहरूलाई "पुनः फेरी" तयार पार्नुहोस्!
कास्ट आयरन स्किलेटलाई मनपर्ने रूपमा प्रयोग गर्दै, बिस्तारै उज्यालो र frac14; पानमा सब्जीको तेल। तेललाई यसलाई नुहाउनुहुने एक माध्यममा उच्च गर्मीसम्म ल्याउनुहोस्। यदि यो जलाउँछ भने, अगाडि जानुहोस् र यो कम गतिमा यो चरण सुरू गर्नुहोस् र प्यानमा घडी राख्नुहोस्।
एकपटक तेल तातो भएपछि, पकाएको सेम थप्न एक मिनेटको लागि तापनि जानुहोस् र अलग गर्नुहोस्। सेमहरूसँग अझैसम्म नमी भएकोले, उनीहरूले तुरुन्तै प्यानमा राखे भने गर्म तेलसँग प्रतिक्रिया हुन सक्छ।
तेलको स्किलेटले ठुलो भएको पछि, सेमहरू र पर्याप्त सेमको रस को पर्याप्त यकीन गर्नुहोस् कि उनीहरु प्यानमा सुकेको छैन भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस्। बर्नरमा पछाडि राख्नुहोस्, मध्यम तापक्रममा सेट गर्नुहोस्, र ठिक पार्नुहोस् ताकि तिनीहरू स्टिक वा जलाउन सक्दैनन्।
तपाईं अहिले आफ्नो श्रमको फलहरू हेर्न सुरु गर्न सक्नुहुनेछ - रिफन्ड सेमले कि मलाई मलाई स्थिरता प्राप्त गर्न सुरु गरिसकेको छ! अब, त्यो प्रामाणिक रिफ्रिड बीन नुस्खा परिणाम प्राप्त गर्न, ती सेमहरु को आधा म्याश गर्न को लागि फोर्क वा स्पट्युला को प्रयोग गर्नुहोस, र त्यसपछि तिनीहरूलाई सबै माथि मिल्ने जारी राख्नुहोस् किनकि यसले कम माध्यमिक गर्मीमा पकाउन जारी राख्छ।
अब थप स्वादको लागि यसको समय!
बीन्सहरू समाप्तिको लागि सेम तयार छ! आफ्नो पसंदीदा छायादार पनीर छनौट गर्नुहोस् - अधिमानतः एक Colby / Monterrey मिश्रण - र 1 /2को 1 /3को एक कप को स्वाद मा निर्भर गर्दछ। पनीर पिघ्नको रूपमा मिश्रणमा राख्नुहोस् र मलाई मलाई पकाउनु, पकाएको सेममा पार्छ! त्यो बर्नर बन्द गर्नुहोस् ... यसको लागि यी प्रामाणिक रिफ्रिड सेमको मजा लिने समय हो!
द्रुत सुझाव: तपाईंको डिश बढाउन डरो नगर्नुहोस्! लसुन पाउडरको प्याश थप्न प्रयास गर्नुहोस्, प्याज पाउडर, र शायद यो एक्स्टिक किकको लागि समाप्त उत्पादनमा केनी पनि ड्याश! आफ्नो मनपर्ने स्वादहरू थप्नुहोस्, यसलाई राम्ररी मिश्रण गर्नुहोस्, र यी स्वादिष्ट सेमहरू जोडी गर्नुहोस् तपाईंको मनपर्ने मेक्सिकन खानासँग!
श्रेणी: मध्य अमेरिका, खाद्य र पेय, मेक्सिकन, मेक्सिको, उत्तर अमेरिका, व्यञ्जनहरु, अतिरिक्त खाना, परम्परा टैग: मेक्सिको, उत्तर अमेरिका, नुस्खा, refried beans, परम्परा
← एक दिन यात्रा बंगलौर बाट
आर्मेनिया, जर्जिया र अजरबैजानको सर्वश्रेष्ठ नेशनल रेस्टुरेन्टहरू →